Raisal Wasaaraha Norway Erna Solberg oo sheegtay in Todobaadkan la furayo Qeybo kamid ah Dalka Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka NorwayRaisal Wasaaraha Norway Erna Solberg oo sheegtay in Todobaadkan la furayo Qeybo kamid ah Dalka
Raisal Wasaaraha Norway Erna Solberg oo sheegtay in Todobaadkan la furayo Qeybo kamid ah Dalka
April 14, 2021 Wararka Norway, Wararka Maanta Somaliska 0
raiisel wasaare Erna Solberg (H) ayaa ku dhawaaqday in howsha dib u furida bulshada Norwey ay bilaabmi doonto todobaadkan.
Solberg waxay tiri waxaa jira sedex sababood oo ay ku dareemeyso kalsooni ku aadan bilaabida dib u furitaanka Norway todobaadkan.
Markii aan horkeenay (qorshaha dib u furista) baarlamaanka Norwey (Storting), waxaan idhi waxaan ku tiirsanaan doonnaa xogta, ee kuma xirna taariikhaha, si aan markale u furno. Hadda, waxaan joognaa meeshii aan ka hirgelin lahayn tallaabada ugu horreysa ee qorshaha dib-u-furista, ”ayay tiri Solberg.
Solberg ayaa xustay in dib u furiddu ay bilaaban karto sababo la xiriira horumarka xaalada cudurka, awooda nidaamka daryeelka caafimaadka, iyo tirada dadka la talaalay.
“Tallaabooyinka la soo saaray ka hor Easter-ka waxay umuuqdaan inay leeyihiin saameyn wanaagsan. Sidaa darteed, waxaan dib uga laabaneynaa talaabooyinkan laga bilaabo Jimcaha, ”ayay raacisay Solberg.
Dawladdu waxay sidaas u oggolaan doontaa iibka cabitaanada illaa 10 PM laga bilaabo Jimcaha, Solberg ayaa sidaas tidhi.
Dawladdu waxay u oggolaan doontaa ardayda ku nool meelaha aan infakshanka sare ku jirin inay fursad u helaan waxbarashada jir-dhiska ugu yaraan hal mar usbuucii.
Bilowga Maajo, dawladdu waxay qiimeyn doontaa bal inay ammaan ku filan tahay si ay u hirgeliso tallaabada labaad ee qorshaheeda dib u furista.
“Qeybta hore ee Maajo, waxaan qiimeyn doonnaa in shuruudaha ay ku habboon yihiin hirgelinta tallaabada 2 ee qorshaha dib-u-furista inta lagu jiro bisha Maajo.